Global Voices teny Malagasy » Fotoana Ho An’ny Fiovàna Ao Amin’ny Efitranombaovao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Jolay 2018 12:08 GMT 1	 · Mpanoratra Georgia Popplewell, Ivan Sigal Nandika imanoela fifaliana
Ny drafitra napetrakay voalohany dia ny hanomboka ny dingana fandraisana Talevaovao hisahana ny Famoahana lahagtsoratra amin'ny faran'ny volana Septambra. Noho ny fialàn'i Lauren, tsy maintsy niova hafaingànana kely izahay. Aorian'ny fialàn'i Lauren amin'ny 13 Jolay, hametraka drafitra vonjimaika izay hanome antoka ny fitohizan'ny asantsika andavanandro izahay. Ny 13 Jolay ka hatramin'ny faran'ny volana Septambra, Taisa Sganzerla , izay ankehitriny toniandahatsoratra ho antsika ao amin'ny faritra miteny Portiogey ary mpikambana ao amin'ny rantsan'ny ekipa fanontàna ihany koa, no handray ny ampahan'ny asan'i Lauren izay misy fiantraikany amin'ny asa andavanandron'ny efitranombaovao. Hanohy ny asany amin'ny maha-Tale vonjimaikan'ny fmaoahana lahatsoratra i Georgia, toy ny efa nataony hatramin'ny fiandohan'ny taona.
Tamin'ny faran'ny volana Jona, nametra-pialàna tamin'ny maha-mpanonta ao amin'ny faritr'i Afrika atsimon'i Saharà azy ihany koa i Endalk  mba hanomanany ny toerana maha-mpampianatra ao amin'ny Oniversite Hamline ao Minnesota amin'ny volana Septambra. Hisolo azy, farafahakeliny, hatramin'ny faran'ny volana Aogositra i Amanda Lichtenstein, raha toa ka mbola manomana ny hanendry olona vaovao ho mpamoaka lahatsoratra izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/07/16/122682/